လေအေးပေးစက်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် [Genvers] လုပ်ငန်းခွင် ၀ င်ရန်အလုပ်အကိုင်
"လေအေးပေးစက်" အပါအဝင်တစ်နိုင်ငံလုံး site ပေါ်တွင်အလုပ်နေရာများစာရင်း
လေအေးပေးစက်အပါအ ၀ င်
left လက်ဝဲအစိုးရပညာရှင်ခေါ်ယူခြင်း◇နှစ် ၅၀ အတွေ့အကြုံနှင့်ယုံကြည်မှု၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ left လက်ဝဲအရာရှိများနှင့်အလုပ်သင်သင်တန်းသားခန့်အပ်ခြင်း
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကြီးထွားလာနေသောတက်ကြွသောလူငယ်ဗဟိုပြုကုမ္ပဏီတစ်ခု!လုံခြုံစိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခု!အလုပ်နှင့်ဝင်ငွေလွယ်ကူခြင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အလုပ်များနေချိန်မှာဘာကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ကြတာလဲ။ [ဒေသခံfromရိယာများမှလျှောက်လွှာများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။ ] ကျွန်တော်တို့သမ္မတဟာ Miyazaki စီရင်စု၊ Hinata City မှပါ။တောင်ဘက်မှ Aomori, Iwate, Akita၊ Miyazaki, Kagoshima, Okinawa ... ဒေသခံများအားကြိုဆိုပါသည်။
လက်ဝဲတရားဝင် (လက်သမား / အလုပ်သင်)
[လက်မှုသမား] ယန်း ၁၅၀၀၀ မှ ၂၇၀၀၀ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ သခင်တစ် ဦး ကြိုဆိုသည်။ [အလုပ်သင်] ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ (လေ့ကျင့်သင်တန်းကာလ) * နေ့စဉ်လစာမှာ ၁၁၀၀ ဖြစ်သည်။
[ဆိုက်] တိုကျို၊ ချီဘ၊ အနီးအနားရှိစီရင်စုများ (အဓိကအားဖြင့်တိုက်ခန်းများနှင့်အဆောက်အအုံအသစ်များဆောက်လုပ်ရန်အတွက်) * တိုက်ရိုက်ပြန်လာ [ရုံး] ၁၅၇ ဟဂ္ဂဟာချိ၊ ၂၀ ရာစု Gaoka၊ Matsudo City, Chiba စီရင်စု ၂၇၁-၀၈၆
Nanbu Co. , Ltd.
●အဆောင်များတပ်ဆင်ထားသည် (တီဗီ၊ လေအေးပေးစက် / အစာပါ ၀ င်သည်)!နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုဖြစ်နိုင်သည်။အများကြီးကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ!ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုသောလက်ဆောင်တစ်ခုရှိသည်။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်အင်တာဗျူး!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုသမှု [ပျော်ရွှင်မှုခံစားခွင့် ၅] ၁ ။သငျသညျ XNUMX ကိုက်ညီသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင် XNUMX ။ချက်ချင်းလစာ (ခရီးသည်အပြည့်အဝပေးချေနိုင်သည်) XNUMX ။အဆောင်မှ ၁ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်။ pachinko၊ စတိုးဆိုင်များနှင့်စူပါမားကက်များရှိသည်!XNUMX အနီးအနားမှာစူပါအများသုံးရေချိုးခန်းလည်းရှိတယ်။TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ Wi-Fi နှင့်ထမင်းစားခန်းတို့ဖြင့်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည်။ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဂုဏ်ပြုသောငွေများရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏အတိုင်းအတာကို ဆက်လက်၍ တိုးတက်စေပါမည်။လက်မှုပညာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သူများပင်အနာဂတ်တွင်ရုံးသို့တက်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ကျေးဇူးပြုပြီးအရာရာတိုင်းကိုငါတို့အတွက်ထားခဲ့ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အင်တာဗျူး
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
# နေ့စဉ်လစာ / ယန်း ၁၁၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက * သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အညီငါတို့လစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
၃၃၇-၁၉၃၊ ဂျူယိုဂျီ၊ ကရှီဝါမြို့၊ ခိဘာစီရင်စု●ခိဘီစီရင်စုနယ်ရှိကစ်ရှီစီးတီး၊ ခိဘာစီရင်စုနှင့်ဆိုင်းရပ်စ်ခရိုင်၊ JR "Kashiwa ဘူတာ" ...
Nanbu Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Aoyagi သည်မီးရှူးမီးပန်းများ၊ အပူပေးစက်များနှင့်လက်မှုပညာဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်။ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသူများသာမကအတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး စွာဆက်သွယ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာနှင့်အလှမ်းဝေးလျှင်ပင်အဆောင်များရှိပါသေးသည်။အဆောင်သည်လုံးဝသီးသန့်အဆောင်ဖြစ်ပြီးတီဗွီ၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည်။ပြန်လည်ပြုပြင်ထားပြီးလှပသောအဆောက်အအုံများရှိသည်။
Aoyagi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
တနင်္ဂနွေနေ့များပိတ်ထားသည်။ (တစ်ပတ်လျှင် ၂ ရက်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း) ပုဂ္ဂလိကမှလည်းဆောင်ရွက်နေသည်။ ♪ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု! လှုံ့ဆော်မှုပေါ် မူတည်၍ ၀ င်ငွေမြင့်မားသည်။စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကြီးမားဆုံးစားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်အဓိကဖောက်သည်များဖြစ်သဖြင့်ရောင်းအားတက်လာသည်
စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်န်ထမ်းသစ်စုဆောင်းမှု!၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သော ၀ န်ထမ်းများဗဟိုပြုသည့်သွက်လက်သောအလုပ်ခွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်ပမာဏသည်တည်ငြိမ်သည်။
လေအေးပေးစက်ကိရိယာ / လျှပ်စစ်အလုပ်ဝန်ထမ်း
ပုံမှန် ၀ န်ထမ်းလစဉ်လစာ ၂၅၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို * လစာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပိုဆုကြေးနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အလုပ်နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၀၀၀၀ အထက်နှင့်အထက် * ၃ လစာနေ့စဉ်လစာ ၉၀၀၀ ယန်း [ပုံမှန်ဝန်ထမ်းရာထူးတိုးခြင်း ...
Tokorozawa City, Saitama စီရင်စု
* အခြေခံအားဖြင့်, Nakatomi (ဂိုဒေါင်) မှာစုဝေးပြီးနောက် site ကို, Saitama စီရင်စု Tokorozawa စီးတီးအပေါ်ဗဟိုပြုစီရင်စုအတွက် site တစ်ခုချင်းစီ
Shinei Co. , Ltd.
★လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။ကျယ်ပြန့်သောအသက်အရွယ်အုပ်စုများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည်♪★★ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများအားတစ်ပြိုင်တည်းစုဆောင်းခြင်း★★ကော်မရှင်စနစ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကိုခေါ်ပါ။ (မာစတာတစ်ယောက်) independent လွတ်လပ်မှုရလိုသူတွေကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်
အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အစပြုသူများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။၀ န်ထမ်းများကသင့်အားကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်လိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။နည်းပညာကိုရယူပါ
လုပ်ငန်းခွင်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ၊ အိမ်တွင်းအလုပ်သမား ၀ န်ထမ်းများ၊ ဓမ္မအမှုထမ်းများ၊ အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ
လစဉ်လစာ ၂၅၀,၀၀၀ - ၂ သန်းယန်းအထိ (အချို့လူများအမှန်တကယ်ငွေရှာကြသည်) နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀-၁၀၀၀၀၀ ယန်းအထက်သို့တိုးမြှင့် * ★ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများအားတစ်ပြိုင်တည်းစုဆောင်းခြင်း★မိဘတစ် ဦး ကိုတစ်ပြိုင်တည်းစုဆောင်းခြင်းကိုကြိုဆိုသည်။
Kumagaya City, Saitama စီရင်စု
Saitama စီရင်စု၊ Kumagaya City ကိုဗဟိုပြုသည့်စီရင်စုနယ်ရှိနေရာတစ်ခုစီ
Shinei Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ